Afọ ole bụ froome - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Chris froome tour de france 2019 - ihe ngwọta bara uru
Chris froome tour de france 2019 - ihe ngwọta bara uru
Afọ ole bụ froome
Otu Ineos abughi nani nwere aha ohuru, kamakwa o nwere igwe ohuru. Nke a bụ Pinarello Dogma F12 ohuru. Ma obu ngwa agha zuru oke.
Lee ya anya. Ma ọ bụ ọbụna ihe ọhụụ, ọhụụ a na-ahụghị na mbụ Ineos livery na nke ahụ dị egwu burgundy fader nke na-agbakwa. Ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara nke a ji mee m osimiri na mpaghara n'ọhịa, ọ bụ n'ihi na nke a nwere ike ịbụ igwe kacha ewu ewu na ụwa ugbu a na Pinarello na Team Ineos kwetara na anyị nwere ike ịse ya, mgbe anyị rutere gaa ebe mmadu n’agaghi ahu anyi, ya bu ebe a ka m na abia mgbe obula achoghi m onye obula ihu ihe m n’eme. ”(Egwu Hip-hop) Agbanyeghị, F12 nwere ọtụtụ ihe maka ya n’ihi na F10 bụ otu n’ime igwe kwụ otu ebe ahụ nke meriri n’ụzọ ọ bụla pụrụ ichetụ n'echiche.
Sprints, climbs, runaways na na 2018 F10 bụ n'ụzọ doro anya ihe ịga nke ọma World Tour. O meriri agbụrụ asaa, gụnyere Giro na Tour, ma merie anọ nke isii Grand Tours ikpeazụ site na Team Skyit. Ugbu a, isi ihe na-aga nke ọma F10 bụ na ọ bụ nnukwu ihe niile, na F12 yiri ka ọ na-ewu ya.
Akụkụ niile kachasị mma sitere na atụmatụ F10 ka edobela maka F12, yabụ anyị ka nwere carbon monocoque zuru oke nke Toray 1100 carbon fiber, obere ikuku aerodynamic fork flat. Mma! Dị ka F10, F12 ga-adị ma rim brek, dị ka anyị nwere ebe a, yana diski breeki mbipute. Ma olee ihe dị iche gbasara F12, ana m anụ ka ị na-ajụ? Otu n'ime ebumnuche ebumnuche kachasị na F12 bụ ime ka ọ dị elu.
E meela ọtụtụ obere tweaks ruo na njedebe ahụ. Nke mbu, enwere otutu njikota nke igwe. Nke a na-enyere idozi ọdịdị nke okpokolo agba ma nye ya ụdị nhicha dị ọcha Silhouette.
Na Pinarello mere ọmụmụ ihe omimi na-agbanwe agbanwe na kọmputa wee chọpụta na ọ nwere ike belata 85% nke ịdọrọ na igwe ọhụrụ ahụ nke eriri. Ihe fọdụrụ 15% bụ ebe anyị nwere obere eriri USB ahụ bụ ebe breeki calipers na-apụ. Isi ihe na-ezochi eriri ndị a niile site na ifufe bụ na F12 nwere ebe ọhụụ ọhụrụ.
Ngwakọta aka na azuokokoosisi, nke a na-akpọ Talon Ultra, nke igwe kwụ otu ebe na-emejupụta 20% nke ihu ihu. Ugbu a ogwe aka a kwesịrị ịnọchite anya mmụba pasent ise nke ikuku nke F10 gara aga, Talon Aero, na nke ekwuru na ọ ga-abụ 28% na-arụ ọrụ nke ọma karịa ọkọlọtọ gburugburu na azuokokoosisi. Okwesiri ighe ohuru kwesiri ka odi mfe ma sie ike, ma abia na uzo uzo site na azuokokoosisi na igwe ozo, o bughi nani ibanye ha.
Pinarello arụsiwo ọrụ ike iji bulie akụkụ ahụ na ịdọgharị eriri ndị ahụ ka ha wee ghara ịdị na-esi ike n'ihi na nke a nwere ike imetụta ọrụ ịgbanwee ma ọ bụ ịrụ ọrụ braking. Enwekwara obere efere dị ezigbo mma nke dị n'ihu ebe a ka m ga - esi kpughee ka ị gaa Nhazi. E nwekwara ndụdụ ọhụrụ.
Ugbu a, ndụdụ Onda ọhụrụ a kwesiri ịbụ ihe ikuku karịa nke gara aga na akụkụ nke enwere ike ịlaghachi na mpaghara a ebe a. Bụ n'ezie miri karịa F10 ndụdụ na tiori ebe a bụ na ọ na-enyere aka mma ọwa na-eduzi ikuku dị ka ọ na-aga gara aga ndụdụ. Ekwuru na nke a ga - eme ka ibelata pacenti iri na ise na ndụdụ gara aga, na ụdị diski breeki a na - ekwu na ọ ga - enwe ndụdụ siri ike iji nyere aka na - eduzi ntụgharị na ntanye nke cantilever diski breeki.
Agbanyeghị, nke a bụ ụdị breeki bim na ị nwere ike ịchọpụtala na Ọgwụgwụ bụ otu ugwu caliper anyị nwere na F10. F12 nwere breeki igwe kwụ ọtọ na isi abụọ na-arị elu, nke dị ezigbo mma n'ihi na breeki igwe kwụ ọtọ na isi ihe abụọ ha na-arị elu dị nnọọ nhịahụ karịa otu breeki breeki. Ogwe ndị ọzọ nwere ọtụtụ obere tweaks ebe a na-eme ka etiti ahụ dịkwuo elu ma dịkwa ike.
Yabụ n'usoro agbụ ahụ ị ga - ahụ na ha dịtụ elu karịa F10 na ihe nkwado dị ala esikwa ntakịrị ntakịrị wee pụta na nke a na - eduga na nkwụsi ike 10% karịa F10. Na mkpokọta, nchekwa ikuku kwesịrị ịbụ watts asatọ na kilomita 40 kwa elekere. Nke ahụ nwere ike ịdị gị ka ọ bụụrụ gị ọtụtụ ihe ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọlị, dabere na echiche gị.
Ma ọ bụrụ na ị ga-atụle ịkwọ ụgbọ 3500km maka izu atọ Grand Tourpretty maara ihe m ga-ahọrọ ma ejiri m n'aka na Chris Froome ga-ahọrọ otu ihe ahụ. Emeela ka ikpochapụ taya dị milimita 28. Ọ bụrụ na ịchọghị iji ọtụtụ aka Talon Ultra, enwekwara ihe nkwụnye na-abanye ebe a ka ị ka nwere ike ịdọrọ eriri ndị ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ogwe aka na akara.
Achọpụtara m ihe ọzọ na enwere obere spacers. Na nkewa spacers i A ezigbo imewe n’ihi na ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazigharị n ’elu gị na ebe spacers ahụ dị, ịgaghị agagharị ụzọ eriri igwe breeki gị, nke bara uru karị ma ọ bụrụ na ị nwere ahịrị hydraulic. Okpokolo agba a dakọtara na ngwa igwe na igwe elektrọnik, nke a bụ nsụgharị DI2 ka anyị tinye igbe DI2 na obere oghere a na obere tube na nke ahụ bụ ebe onye ndozi mgbapụta gị ga-aga kwa ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ibu.
Enwere 13 iche iche nha maka etiti na. Handlebars abịa na 16 dị iche iche nha. Kedu maka ibu? Ọfụma, ogo ekwuputara maka breeki a na - eteghị acha bụ gram 820, na diski breeki a na - eteghị aka dị obere karịa na gram 840.
Ma m ga-tụọ igwe kwụ otu ebe ahụ dum. M nwekwara diski breeki, nke m ga-atụle. 6.97.
O doro anya na ọ dị mfe, na njedebe nke UCI. So 7.5 kilos maka diski breeki.
Obere ike. (Hip-hop music) Nke a bụ ụdị diski breeki a kapịrị ọnụ ma ọ bụrụ na agba Ineos abụghị maka ndị nọ n'afọ iri na ụma nke a bụ otu n'ime ndụ ndị ọzọ ị nwere ike ịzụta, n'ezie nke a na-ewu ya na SRAM Red Access Group setịkwara mara ezigbo mma. na m na-amasị otú agba ọrụ na-eji mesie asymmetry nke etiti, nke a bụ smart anya nke ukwuu neater na tidier karịa rim breeki version. USB anaghị abịa n'ihu breeki caliper na ọ dịghị ngwa-ntọhapụ lever n'ihu.
Ọ dị ka ọ dị nro karịa na-ehicha ya, ngwa ngwa. E nwere ya. Pinarello Dogma ohuru ohuru.
Na, ọma, e wezụga Dogma FS, ndị a bụ abụọ anyịnya igwe ọhụrụ si Pinarello dị ka ọtụtụ izu. Ha na-arụsi ọrụ ike. Ugbu a, ka anyị gaa ka anyị mara na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
I chere na F12 ga-eme Tour de Fra. ga-emeri? nce? Ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị n'isiokwu a biko nye ya mkpịsị aka, ma ọ bụrụ na ị ghara isiokwu Dan ebe o nwetara ọhụụ mbụ nke nkwenkwe FSwell, ị nwere ike ịlele ya site na ịpị n'okpuru Ọfọn igwe kwụ otu a dị na agba GCN, ọ bụghị ya? O yikarịrị ka m ga-edebe nke a. Eeh.
Kedu mgbe Chris Froome dara na Tour de France?
Na 12 June 2019, Froome nọrọ n'ụlọ ọgwụ na mgbaji agbaji femur, mgbaji agbaji, na ọgịrịga gbajiri, mgbe nnukwu ọsọ gbawara na mgbidi mgbe ọ na-azụ ọzụzụ maka ọkwa nke 4 nke Critérium du Dauphiné. Ihe ahụ merenụ mere ka ọ ghara itinye aka na 2019 Tour de France.
Olee mgbe Chris Froome lụrụ nwanyị wee nwee nwa nwoke?
Froome na Cound kwagara Monaco ọnụ na 2011 wee banye na March 2013. Di na nwunye ahụ lụrụ na November 2014, na 14 Disemba 2015 nwere nwa mbụ ha, nwa nwoke aha ya bụ Kellan. Froome raara onwe ya nye 2013 Tour de France meriri nne ya, onye nwụrụ n'ọrịa izu ise tupu njem mmalite ya na 2008.
Ebee ka Chris Froome mechara na World Championship?
N’ọnwa Julaị, o kwuru ihe nrite ọla nchara n’ọsọ okporo ụzọ na All-Africa Games na Algiers, Algeria. Na 26 Septemba, o tinyere iri anọ na mbụ na ikpe n'okpuru oge 23 na asọmpi asọmpi ụwa na Stuttgart, nkeji atọ na sekọnd iri atọ n'azụ onye nrite ọla edo ahụ, Lars Boom nke Netherlands.